धर्ननिरपेक्षता र संघीयता परिवर्तन हुँदैन : सुवास नेम्वाङ Canada Nepal
धर्ननिरपेक्षता र संघीयता परिवर्तन हुँदैन : सुवास नेम्वाङ
क्यानाडा नेपाल आश्विन ३ २०७८
काठमाडौं । एमाले संसदीय दलका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले धर्मनिरपेक्षता र संघीयता परिवर्तन नहुने बताएका छन् । संविधानसभाका अध्यक्ष नेम्वाङले नेपालको संविधान विश्वकै इतिहासमा अद्वितिय रहेको बताए । एमालेद्वारा आइतबार आयोजित संविधान र राष्ट्रिय दिवस कार्यक्रममा बोल्दै नेम्वाङले पहिलो संविधानसभा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सल्लाह बिना नै विघटन गर्दा आफू देश अध्याँरो सुरुङतिर गएको बताएको स्मरण गरे ।
‘त्यतिबेला देशलाई अध्यारोतिर हाल्न लागेका साथीहरुले अहिले प्रतिगमन भनिरहहेका छन्’, नेम्वाङले भने । एमालेको प्रयासमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भएको र संविधान जारी भएको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘एमालेको अत्याधिक प्रयास र सबै दल एक ठाउँमा उभिँदा दोस्रो संविधानसभाको चुनाव भयो । हामीले संविधान बनायौं । ७० वर्षको जनताको भावनाले मूर्त रूप पायो । समाजवाद उन्मुख संविधान बनाएरै छाड्यौं । यो महत्वपूर्ण उपलब्धी हो ।’
पाँच वर्ष आठमा महिना लगाएर समावेशी संविधानसभाले सबैको भावना समेटेर संविधान बनाएको बताए । ‘सबै हिसाबले समावशी ३१ वटा राजनीतिक दलको उपस्थिति रहेको सभाले संविधान बनाएको हो । विश्वमै उत्कृष्ट संविधानसभाले शून्यबाट काम सुरु गरेर सहभागितामुलक ढंगले संविधान निर्माण गरेको हो’, नेम्वाङले ‘संविधानको विधेयक पनि आफैले बनायौं । शून्यबाट माथि जाने अवधारणाअनुसार काम गर्यौं । व्यक्तिगत र संस्थागतरुपमा जनतामाझ लाखौं सुझाव ग्रहण ग¥यौँ । सबैलाई सुझाव लियौं । न्यायाधीशहरूको लियौं । राउटेहरूका राजा सिंहदरबारमा आएर सुझाव दिएको सम्झिन्छु । हामी जंगलको राजा हो । संविधानमा लेखदेउ, राउटेलाई रुख काट्ने अधिकार हुन्छ भनेर सुझाव दिए ।’
जनताको सुझाव संकलन गरेर प्रतिवेदनमा ढाल्न दुई वर्ष लागेको बताएका उनले भने, ‘जनताको सुझाव पढेर प्रतिवेदन बनाउन लागे । दिनमा २० जना सांसदले फोन गर्थे जनतालाई । यस्तो जवाफ दिनुभएको रहेछ, म पढ्दैछु भनेर । यसरी प्रतिवेदन तयार भयो । अहिले पनि संसदको पुस्तकालयमा राखिएको छ । त्यो प्रतिवेदनमा आधारित रहेर मस्यौदा बनायौं । शून्यबाट मस्यौदामा पुग्यौं । मस्यौदा तयार भयो ।’
आफू पूर्वको मानिस रहेको र लिम्बूवानदेखि थारुवानसम्म सुझावहरू समेटेको भन्दै नेम्वाङ भने, ‘म त पूर्वको मान्छे । हाम्रो इलाको माथिपट्टी लिम्बुवान भनिने क्षेत्र छ । ति लिम्बुवानदेखि थारुवानसम्म प्रश्नहहरु आए । ति सबैलाई समेटेर सहभागितामूलक ढंगले संविधान बनाउने काम भएको छ ।’
संविधानसभाको मस्यौदा नबुझाउन दबाब पनि आएको स्मरण गर्दै उनले संविधान समयमा नबनाएको भए के हुन्थ्यो भन्ने त्यसपछिका घटनाले प्रष्ट पारेको बताए ।
‘व्यापक छलफल गरेर समावेशी सहभागितामूलक गणतान्त्रिक र धर्मनिरपेक्ष संविधान बनायौं । समझदारी र सम्झौताबाट बनेको हो’, उनले भने ।
संविधान बनाउने क्रममा नेपालको झण्डा र नामसमेत परिवर्तनको प्रस्ताव आएको स्मरण गर्दै नेम्वाङले भने, ‘नेपालको झण्डादेखि नेपालको नामसम्म परिवर्तनको प्रस्ताव पनि आए । तर हामीले सर्वोत्कृष्ट छ भनेर यथावत राख्यौं । जबसम्म आकाशमा सूर्य र चन्द्र रहन्छ, तबसम्म नेपाललाई कसैले केही गर्न सक्दैन भनेर झण्डा पारित भयो । संघीयता धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रसहितको संविधान बन्यो । ठूला दलले धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रमा परिमार्जन गर्छन् भन्ने सुनिन्छ ।’
प्रमुख पार्टीको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशितामाथि परिवर्तनको एजेण्डा नबनेको भन्दै यसलाई परिमार्जन गर्ने हल्लामात्रै रहेको बताए । ‘गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता समावेशिता परिमार्जन गर्ने प्रमुख पार्टीको कुनै एजेण्डा बनेको छैन । परिमार्जनको कुरा हल्लामात्रै हो । अहिलेको संविधान जनताले बनाएको हो । यसअघिका संविधानको स्रोत शासक र राजा हुन् । २०४७ को संविधान पनि राजाले नै बनाएका थिए । अहिलेको संविधान जनताले बनाएको हो’, नेम्वाङले भने ।
आश्विन ३, २०७८ आइतवार १२:५१:४० बजे : प्रकाशित
ओलीलाई गगनको जवाफ : प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेपछि अब त थाहा पाउनुभयो नि!
काठमाडौं - नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गगनकुमार थापाले सार्वजनिक संस्थाहरु बलियो हुनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कर्मचारी संघको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता थापाले सार्वजनिक संस्थाप्रति अलमल रहेको र त्यो नेताहरुमा पनि विद्यमान रहेको बताए ।
कांग्रेसमाथि उद्योग बेचेको आरोप लाग्ने गरेको भन्दै थापाले त्यो सबै नबुझेर गरिएको टिप्पणी भएको बताए । उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि चुनावका बेला कांग्रेसले उद्योग कलकारखाना बेच्यो, निजीकरण गर्‍यो भनेर लगाएको आरोप उनी प्रधानमन्त्री बनेपछि खण्डित भएको बताए ।
'सार्वजनिक संस्थाहरुबारे हामी कहिलेकाही अलमलमा परेको पाउँछौं । कहिले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको बारेमा रुन्छौं । कहिले भृकुटी कागजका बारेमा रुन्छौं । अहिले पनि उद्योग बेचेर खायो भनिन्छ । तर आजसम्म उद्योग बेचेर खायो भनेर गाली गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा वा सरकार चलाउन पाउदै गर्दा फर्केर आएर चुरोट कारखाना खोलेको, जुत्ता कारखाना खोलेको, कागज कारखाना खोलेको कही पाउनुभएको छ ?' थापाले प्रश्न गरे ।
उनले अघि थपे, 'किनकि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेको के थाहा हुन्छ भने सरकारले जुत्ता कारखाना चलाउने होइन रहेछ, चुरोट कारखाना सरकारले चलाउने होइन रहेछ भन्ने त्यहाँ थाहा हुन्छ । १७ करोड पिअर जुत्ता नेपाल फुटवेयर इण्ट्रस्टीमा उत्पादन हुन्छ । उत्पादन क्षमता छ । यो बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना निजीकरण भएरै सञ्चालनमा आएको हो नि ।'
नेता थापाले विद्युत प्राधिकरणले आर्जन गरेको प्रतिष्ठा र ओज कायम राख्न र नाफामा लैजान आग्रह गरे । प्राधिकरणले बनाउनुपर्ने परियोजना अरुलाई दिएकोमा उनले आक्रोश पोखे । विद्युत अपत बढिरहेको भन्दै थापाले प्रसारण लाइन बनाउन सहायता आउँदा विदेशी सेना आउँछ भनेर हल्ला गरेर अवरोध गर्ने काम भएको बताए । विदेशी सहयोग नलिने भए स्वदेशी लगानीमै प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने उनको जोड छ । न्युज कारखाना
कार्तिक ५, २०७८ शुक्रवार १८:२५:४१ बजे : प्रकाशित
काठमाडौं - नेकपा एमालेको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि गठित कार्यदलका संयोजक भीम रावलले राजीनामा दिएका छन् ।
केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेर अन्तरपार्टी निर्देशनबाटै जारी भएको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएकामा असन्तुष्टि जनाउँदै रावलले राजीनामा दिएका हुन् ।
'यो मेरो व्यक्तिगत कुरा होइन । अपानिबाट जारी भएको कुरा कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा हो । र, त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने तर्क आएको हुनाले म त्यसप्रति सहमत हुन सकिनँ', उनले भने ।
रावलले थपे, 'एकातिर भीम रावललाई कार्यदल संयोजकको जिम्मा छ कार्यान्वयन गरे भइहाल्यो भन्ने, अर्कोतिर पार्टीमा भएका छलफल र केन्द्रीय कमिटीले गरेको निर्णय मान्ने नभएपछि त्यो कार्यदलमा बसिरहनुको कुनै औचित्य नभएको हुनाले त्यसबाट राजीनामा दिने बैठकमा घोषणा गरेको छु र लिखित रूपमा भोलि अध्यक्षलाई पठाउने जानकारी गराएको छु ।'
कार्तिक ५, २०७८ शुक्रवार १९:१६:३६ बजे : प्रकाशित
काठमाडौं - नेकपा एमालेले केन्द्रीय समिति बैठक आह्वान गरेको छ । च्यासलमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले आगामी १२ कात्तिकमा केन्द्रीय समिति बोलाउने निर्णय गरेको हो ।
राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधि चयनसम्बन्धी मापदण्ड तय गर्न र अन्य आवश्यक निर्णय गर्नका लागि केन्द्रीय कमिटी बैठक १२ कात्तिकमा बस्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए । त्यस अगाडि ११ कात्तिकमा स्थायी कमिटी बस्नेछ ।
आजको बैठकले केन्द्रीय कमिटीअगावै १०बुँदे सहमति कार्यान्वयन गरिसक्ने निर्णय पनि गरेको छ । 'बैठकले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनका सम्बन्धमा आमरूपमा सबै ठाउँमा कार्यान्वयन हुँदै गएको र समस्या रहेको एकाध ठाउँमा केन्द्रीय कमिटी बैठकसम्म टुंग्याइसक्ने र यसका लागि सम्बन्धित नेतालाई निर्देशन गरेको छ', प्रवक्ता ज्ञवालीले भने ।
ज्ञवालीले १२ कात्तिकसम्म १० बुँदे कार्यान्वयन भइसक्ने भने पनि कार्यदलका संयोजक भीम रावलले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कार्यान्वयन नहुने भनेको भन्दै संयोजकबाट राजीनामा दिइसकेका छन् ।
कार्तिक ५, २०७८ शुक्रवार २०:०६:३७ बजे : प्रकाशित
एमाले स्थायी कमिटीले गर्‍यो यस्ता आठ निर्णय
काठमाडौं - नेकपा एमालेले १०औँ महाधिवेशन मूल व्यवस्थापन समितिलाई पूर्णता दिएको छ । बिहीबार सुरु भई शुक्रबार सम्पन्न बैठकले चितवनमा मंसिरमा तोकिएको राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीका लागि रामबहादुर थापा 'बादल'को संयोजकत्वमा गठित २१ सदस्यीय समितिलाई पूर्णता दिएको हो ।
बैठकले राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधि चयन गर्नका लागि २०७७ चैत मसान्तसम्म सदस्य बनेका र नवीकरण गरेका सदस्यहरू योग्य रहने निर्णय गरेको प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार बैठकले १०औँ महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनका लागि विद्युतीय मतदान मेसिन प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेको छ ।
राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधि चयनसम्बन्धी मापदण्ड तय गर्न र अन्य आवश्यक निर्णय गर्नका लागि स्थायी कमिटीको बैठक ११ कात्तिकमा बोलाउने निर्णय गरेको छ ।
केन्द्रीय कमिटी बैठक १२ कात्तिकमा बस्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय महाधिवेशनमा विभिन्न मुलुकका मित्र पार्टी, भाइचारा पार्टी र देशभित्र विभिन्न राजनीतिक दललाई निमन्त्रणा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
बैठकले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनका सम्बन्धमा आमरूपमा सबै ठाउँमा कार्यान्वयन हुँदै गएको र समस्या रहेको एकाध ठाउँमा केन्द्रीय कमिटी बैठकसम्म टुंग्याइसक्ने र यसका लागि सम्बन्धित नेतालाई निर्देशन गरेको छ ।
बैठकले रौतहटका कुन्दन कुशवाहा र बाराका मोहमद समीरलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गर्ने निर्णय पनि गरेको प्रवक्ता ज्ञवालीले जानकारी दिए ।न्युज कारखाना
कार्तिक ५, २०७८ शुक्रवार २०:४१:०३ बजे : प्रकाशित
काठमाडौं - नेकपा एमालेले शनिवार देशभर वडास्तरका अधिवेशन आयोजना गर्दैछ । एमालेले आसन्न दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनअन्तर्गत आज वडा अधिवेशन आयोजना गरेको हो भने कात्तिक ९ गते पालिका अधिवेशन गर्नेछ ।
आज बाढीपहिरोबाट प्रभावित जिल्लामा बाहेक अन्य जिल्लामा वडा अधिवेशन हुनेछ । एमालेको १०औँ महाधिवेशन १० देखि १२ मंसिरमा चितवनमा हुनेछ ।
शुक्रबार बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले रामबहादुर थापा ुबादलुको संयोजकत्वमा गठित २१ सदस्यीय १०औँ महाधिवेशन मूल व्यवस्थापन समितिलाई पूर्णता दिएको थियो ।
बैठकले राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधि चयन गर्नका लागि २०७७ चैत मसान्तसम्म सदस्य बनेका र नवीकरण गरेका सदस्यहरू योग्य रहने निर्णय गरेको प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए । महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनका लागि विद्युतीय मतदान मेसिन प्रयोग गरिने ज्ञवालीले बताए ।
कार्तिक ६, २०७८ शनिवार ०७:४०:३७ बजे : प्रकाशित
काठमाडौं - नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं १० बुँदे कार्यान्वयन कार्यदलका संयोजक भीम रावलले स्थायी कमिटी बैठकमा फरक मत दर्ज गरेका छन् । च्यासलमा जारी स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कार्यदलबाट आएका सुझावलाई लत्याएपछि रावलले पाँच पृष्ठ लामो फरक मत दर्ज गरेका हुन् ।
'१० बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि कार्यदलको बैठक बसेर सुझावहरू तयार पारेको थियो । स्थायी कमिटीमा धेरै सदस्यले कार्यान्वयन गर्दै जाने भनेको तथा सौहार्दपूर्ण छलफल भए पनि अन्तिममा पार्टी अध्यक्षले निष्कर्ष सुनाउँदा भएका सबै छलफलहरू, १० बुँदे सहमति, अपानिभन्दा भिन्न र अमिल्दो किसिमले उहाँले त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने किसिमले कुरा राख्नुभएकाले मेरो त्यसप्रति सहमति हुन सकेन । पाँच पृष्ठ लामो फरक मत दर्ज गरेको छु', उनले भने ।
रावलले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै कार्यदलको संयोजकबाट राजीनामाको घोषणासमेत गरेका छन् । केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेर अन्तरपार्टी निर्देशनबाटै जारी भएको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएकामा असन्तुष्टि जनाउँदै रावलले राजीनामा दिएका हुन् । 'यो मेरो व्यक्तिगत कुरा होइन । अपानिबाट जारी भएको कुरा कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा हो । र, त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने तर्क आएको हुनाले म त्यसप्रति सहमत हुन सकिनँ', उनले भने ।
पार्टीको निर्णय नै नमान्ने र सुझावहर"लाई कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गरेकाले राजीनामा दिएको उनको भनाइ छ । 'एकातिर भीम रावललाई कार्यदल संयोजकको जिम्मा छ कार्यान्वयन गरे भइहाल्यो भन्ने, अर्कोतिर पार्टीमा भएका छलफल र केन्द्रीय कमिटीले गरेको निर्णय मान्ने नभएपछि त्यो कार्यदलमा बसिरहनुको कुनै औचित्य नभएको हुनाले त्यसबाट राजीनामा दिने बैठकमा घोषणा गरेको छु र लिखित रूपमा भोलि अध्यक्षलाई पठाउने जानकारी गराएको छु', उनले भने ।
रावलले १० बुँदे सहमतिविपरीत केन्द्रीय समितिमा मनोनीत गर्ने विषयमा पनि असहमति जनाएका छन् । 'कुनै छलफल नगरी, विधि-पद्धतिबिना दुई जना राख्ने कुरामा असहमति छ', उनले भने । रावलले आफ्ना लागि महाधिवेशन महत्त्वपूर्ण कुरा नभएको बताए । पार्टी एकताबद्ध बनाउने कुरा ठूलो भएको उनको भनाइ थियो । न्युज कारखाना
कार्तिक ६, २०७८ शनिवार ०७:५५:२२ बजे : प्रकाशित